Course များပြီးဆုံး — MYSTERY ZILLION
September 2008 edited October 2009 in Project
Internet & Email Course နှင့် Just Knowledget Course များပြီးဆုံးပါပြီ။ စာမေးပွဲ သို့မဟုတ် Assignment ထပ်ခိုင်းပါမယ်။ ယခု Making Virus စတင်သင်ကြားနေပါပြီ။
internet & email course နှင့် just knowledget course များပြီးဆုံးပါပြီ။ စာမေးပွဲ သို့မဟုတ် assignment ထပ်ခိုင်းပါပြီ။ ယခု making virus စတင်သင်ကြားနေပါပြီ။
ကိုယ်ရေးတာ ကိုယ့်ဟာကို မနိုင်ပဲဖြစ်ကုန်ပါဦးမယ်....
googooster wrote: »
ဟီး အဆိုင်းမန့် တင်ခိုင်းမယ်တဲ့ တက္ကသိုလ်မှာတောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်မတင်ချင်လို့ ခိုးချနေတာကို အခု ဘယ်သူဆီ ကခိုးရဦးမလဲ မသိဘူး။ Making Virus တဲ့ တက်ဖြစ်အောင်တက်ရမယ်
Assignment တဲ့... တစ်ခါမှ တင်ဖူးဘူး... ခုထိ
ကျောင်းတက်တုန်းကလဲ ကျောင်းကျောင်းနဲ့ ထန်းတောပဲရောက်နေတာ... (ဟီး... အဲချိန်တုန်းက မုံရွာ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်က ထန်းတောတွေကြားထဲ ဖွင့်ထားတာကိုး.. အနော့ အပြစ်ဟုန်ဘူး ဖွင့်တဲ့ သူတွေ အပြစ်... ) Roll Call 70% မပြည့်လို့ ၁ နှစ်ထပ်နေရသေးတယ်...
ကဲ.. ခုဘဲ Edu မှာ Register လုပ်ပြီ။ Assignment လဲ မှန်မှန်တင်မယ်....
စိုင်းစိုင်း၊ စူသီ၊ ပီဇီ၊ ကိုတွစ်တီတို့ စေတနာကို လေးစားလွန်းလို့....
သင်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ virus တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို သိဖို့ပါ။ ဒါမှပဲ သတ် တတ်မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် သင်ရတာပါ။ ဖျက်လို ဖျက်စီးကိုတော့ အားမပေးဘူးဗျ။ စသင်ကတည်းကပြောထားပြီးသား။ နောက်ပြီး အခုက Starter Guide ပါ။ အခြေခံနားလည်ရုံလောက်ပဲပေါ့။
making virus က ဘယ်မှာ သင်ရမှာလဲ ခင်ဗျာ......
သင်ချင်လှပြီဗျို့............မြန်မြန်သာ ရေးပေတော့ ဆရာရေ....................
ကျနော်လည်း သင်ချင်ပါတယ်ဗျို ့... မြန်မြန်လေးလုပ်ပါ...
sing up လုပ်ဖို့တော့ လိုမယ်နော် :103:
လုပ်ကြပါဦးဗျာ long on ၀င်ရင်၀င်မရလို့ပါ ခဏခဏဘဲ
ဖြစ်နေတယ် အခုလည်း edu မှာvirus သင်တန်းလေးတက်ချင်တာ ၀င်မရဘူး ဗျာ
edu ကို ဒါနဲ့ဘဲ၀င်လို့မ၇ဘူးလား
တကယ်ပြောတာပါဗျာ လုပ်ထားထား ၅ခုလောက်ရှိတယ် အခုမှာဒါလေးနဲ့အဆင်ပြေသွားတာ
ဒါပေမယ့် edu မှာ၀င်လို့မရဘူး ဘာလုပ်ရမလည်း
:68:no phone, :68:no address:68:
ကြိုးစားဖို့ နောက် အနှစ် ၄၀ လောက်သာကျန်ရှိတော့သည်။
i can't find virus making course
ko zay wrote: »
www.edu.mysteryzillion.org မှာရှိပါသည် :67::67:
To enter this wesibe www.edu.mysteryzillion.org , Page not found !!.. HTTP 404 Not Found !!......:((
ကျောင်းတက်တုန်းကလဲ ကျောင်းကျောင်းနဲ့ ထန်းတောပဲရောက်နေတာ... (ဟီး... အဲချိန်တုန်းက မုံရွာ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်က ထန်းတောတွေကြားထဲ ဖွင့်ထားတာကိုး.. အနော့ အပြစ်ဟုန်ဘူး ဖွင့်တဲ့ သူတွေ အပြစ်... :d) roll call 70% မပြည့်လို့ ၁ နှစ်ထပ်နေရသေးတယ်...
တင်မယ်သာပြောနေတာ သင်တဲ့ စာသင်ခန်း အဲ စာသင်တဲ့ဆိုဒ်ကို ၀င်လို့မရလို့စိတ်ညစ်နေတာနော် ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးး
user=CodeName wrote: »
MYSTERY ZILLION edu.mysteryzillion.org ခဏ ပိတ်ထားမည်
ကို စေတန်ရေ... networking course တွေ ဖွင့် ရင် ပြောပါ။ ကျွန်တော် တက်မလို့ပါ။
ကျွန်တော် networking ကို လေ့လာပြီး စာမေးပွဲဖြေမလို့ပါ။
ကျွန်တောှ wordpress နဲ့ ပြန်ပြောင်းမလို့ ခဏ ပိတ်ထားပါတယ်။
To enter this wesibe www.edu.mysteryzillion.org , Page not found !!.. HTTP 404 Not Found !!..... Me too.................... :-(
၀င်လို့လဲမရတော့ဘူး စာသင်ခန်းကမရှိတော့ဘူးလား ကူညီကြပါအုံး